Apple inobvisa iyo Finder yeAirpods application kubva kuApp Store | IPhone nhau
Ignacio Sala | | IPhone zvishongedzo, IPhone maapplication
Pane kanopfuura kamwe chiitiko takakwanisa kuongorora mashandiro anoita vanhu vari mukutungamira kwekuongorora kunyorera kunosvika kuApp Store, kazhinji kuratidza nzira dzakasiyana kana uchibvuma kana kuramba kunyorera. Haisi nguva yekutanga ivo kubvuma kunyorera uye vozozvibvisa nekuda kwekusaenderana nemitemo yakamisikidzwa. Yekupedzisira iyo yakatambura kusanzwisiswa kwevatariri veApp Store iko kunyorera kwatakataura nezvayo mazuva mashoma apfuura Finder yeAirPods, chikumbiro chinotibvumidza kuti tiwane maAirPod edu munzvimbo isina kukwana, kwatinoziva kuti tarasikirwa iyo, kushandisa iyo bluetooth yeiyo imwechete.
Sezvinotarisirwa, Apple yabvisa chikumbiro, chikumbiro icho chiri pachena kuti chakawana wongororo dzakanaka kwazvo muApp Store, uko kwaive nemavhareji mamakisi e4,5 kubva pa5 nyeredzi. Sezvineiwo kana chishandiso ichi chave nemukurumbira, mamaneja epamusoro eApple akaenderera mberi nekudzinga chishandiso ichi kubva muchitoro chatinogona kuchengetedza mari yatinoisa AirPod nyowani, kana zvinosuwisa kuti tikarasa.
Kana chikumbiro chabviswa chete, musimudziri agashira email ichimuzivisa kuti "chikumbiro chake hachina kukodzera App Store". Iyo Cupertino-based kambani haina kupa uye haizopa imwezve ruzivo mune izvi. Pamwe nekuti haidi kuti vashandisi vakwanise kudzoreredza maAirPod avo (kana tichifunga zvisirizvo) kana nekuti pfungwa yekukwanisa kupa sevhisi iyi haina kusiya pfungwa dzekufunga maininjiniya ayo. Kana kuti pamwe une zano mune ramangwana rekupa sevhisi yakafanana, kunyangwe isu tisingazive kuti ungazviita sei.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Apple inobvisa iyo Finder yeAirpods application kubva kuApp Store
Dzimwe nguva ruzivo rwakadai runondiita kuti ndifunge nezve kusanamatira neApple.
Dzimwe nguva hapana anozvinzwisisa.
Ini ndoda kutenda kuti imhaka yekuisa mutengo wepasi paapp iyo inoshandiswa kutsvaga Apple chigadzirwa ... Pamwe, dai bhizinesi modhi yanga yasiyana, sekuisa kushambadzira mukati meapp uye mubhadharo wekubvisa zvakataurwa. kushambadza, ingadai isina kubviswa ... asi kushambadza pachayo sechishandiso chekushandisa kuti uwane chigadzirwa cheApple, handifunge kuti avo vanobva kuCupertino vanoseka kuti mushandisi wekupedzisira anofanira kubhadhara yechitatu-bato Anwendung anoshandiswa kutsvaga chigadzirwa chigadzirwa 😛